I-Clutch Disc, i-Clutch Pressure Plate, Idrayivu Yedrayivu Eqhutshwa - I-Hengyue
ISinotruk HOWO Truck Tr ...
T5189-14302 ugandaganda cl ...
430mm ithusi based clu ...
Ikhwalithi ephezulu imboni h ...
China bamba izingxenye indoda ...
iloli bamba disc oem ​​...
Izingxenye Auto iloli imfuhlumfuhlu ...
Heavy duty iloli clutc ...
Ikhwalithi ephezulu izingxenye ezisele ...
I-American Heavy Duty Tr ...
Ikhwalithi ephezulu yeloli ...
Iloli Clutch Disc
Okwe-America Heavy Duty Truck 108925-82 (15-1 / 2 "x 2") Ukusebenza Okuphezulu Kwe-Manual-Lungisa i-Clutch kit Ye-America Heavy Duty Truck ，
Iloli Clutch Plate
Lo sayizi we-Clutch ungama-350 * 10 * 51, Ngokuphathwa kokushisa nangaphezulu. Idiski ye-Clutch Ngokulahleka okuphansi, ngaphandle komsindo, i-Long Service Life.Singathuthukisa i-clutch disc ngokuya ngomkhuba wokudweba namasampuli.OEM izinga eliqinisekisiwe, ngamanani wokuncintisana.
Iloli Clutch Disc For Hino
Izingxenye ze-Cangzhou Hengyue auto Co., Ltd. itholakala eHejian, Hebei, eduze nenhlokodolobha yaseBeijing neTianjin port, ezokuthutha zilula kakhulu.Iqoqo locwaningo oluzimele nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa njengenye ye-clutch professional yokukhiqiza inkampani, uneminyaka eminingi ye bamba ukukhiqizwa inhlangano isipiliyoni. Ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kwe-clutch disc ngaphezu kwamaqoqo ayi-100,000. Le nkampani inezinhlobonhlobo ezinkulu zokumisa okwenziwe ngosayizi naphakathi nendawo, imishini yokucubungula ukushisa kokushisa, kanye nemishini ehlukahlukene yesikhunta nemishini yokuhlola. Ikhwalithi yomkhiqizo inokwethenjelwa, futhi inokumelana nokugqoka, ukumelana nokushisa okuphezulu nempilo ende, njll.